Fitaovana metaly Sheet mora manadio orinasa sy mpamatsy | Ouzhan
Ny fanamafisam-peo sy ny fikosoham-baravarankely
1. Ny famolahana dia manosotra ny ambonin'ilay zavatra mifono na sarimihetsika manarona miaraka amin'ny haino aman-jery toy ny taratasy sandika, pumice, vovoka vato tsara, sns.
2. Ny poloney dia fomba fanodinana izay mampiasa ny vokatra mekanika, simika na elektrokimika mba hampihenana ny fahamendrehan'ny tontolon'ny asa hahazoana fahazavana sy malama tsara.
Ny anjara asan'ny fanamoriana vy sy ny fikosoham-bary
- Ny famolavolana bobongolo dia hanatsara ny fanoherana ny fitafiana sy ny fanoherana ny harafesin'ny endrika bobongolo, ary hanitatra ny androm-piainan'ny bobongolo.
- Ny fanosorana ny bobongolo dia afaka manatsara ny fahamarinan'ny velaran'ny lasitra, misoroka ny famoronana burrs, ary mampihena ny fisian'ny vokatra tsy mandeha.
- Ho an'ny bobongolo, ny famolahana dia afaka mampihena ny fanoherana ny resina ary mahatonga ny vokatra plastika mora mipetaka. Ahenao ny tsingerin'ny famokarana, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana ary mitsitsy vola ho an'ny orinasa.
- Ho an'ny indostrian'ny optique, ny famolavolan'ny bobongolo dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny fahaiza-manao optika sy ny hatsarana amin'ny sangan'asa amin'ny be indrindra.
Tombony amin'ny serivisy fanoratana vy ao Ouzhan
- Ny fizotry ny fanamafisam-peo sy ny fikosoham-bolo vita amin'ny metaly dia iharan'ny fanaraha-maso kalitao hentitra.
- Araky ny sary na santionany ho an'ny famolavolana vy mazava sy fanodinana fikosoham-bary.
Previous: Faritra fanapahana laser tamin'ny metaly OEM
Manaraka: Sombin-javatra vy metaly poloney faritra
Black anodized 6061-T6 firaka aliminioma cnc machi ...